iPhone bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu smartphones na ahịa. Ha na-mara maka àgwà, ọsọ na a otutu ngwa ọrụ nwere ike download si App Store. Akụkụ kasị mkpa nke ọ bụla iPhone bụ ya sistemụ (os). Luckily, Apple mere a zuru okè OS n'ihi na nke a smartphone. Ndị ọhụrụ version, iOS 9 na-eweta ọtụtụ ndozi na-eme ka ya ọbụna mma ma ndị ọzọ ọrụ na onye-enyi na enyi.
Part 1. Olee ndị na-emekarị furu efu data na ha iOS 9 ngwaọrụ
Dị ka e hotara na mbụ, iOS 9 bụ otu nke kasị mma sistem maka smartphones na mbara ala. Otú ọ dị, ọ na-nwere ụfọdụ drawbacks nwere ike ime ka data ọnwụ. Nke a bụ oké nsogbu na ya nwere ike ime onye ọ bụla. Ọ bụrụ na nke a mere ka ị na-ama, ị maara otú nnukwu a nsogbu ọ bụ. Ị nwere ike ida gị ozi, foto, videos, ndetu na onwe onye ndị ọzọ data. Taa, ọrụ nwere otutu data na ha smartphones, nanị n'ihi na ha na-eji ha fọrọ nke nta ka ihe niile. A na-eme ọnọdụ ọbụna njọ. Iji zere adịkwa gị data, ị ga-mara otú unu nwere ike ida ya na otú iji gbochie ya.
Ihichapụ gị data, mmadụ na mberede, bụ ihe kasị nkịtị ihe mere adịkwa data.
Emelite gị iOS bụ na-emekarị adịghị njọ na ọ dịruru a di na nwunye nke nkeji. Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike imebi esịtidem nchekwa gị iPhone na nke rụrụ arụ niile data na ya.
Na ụfọdụ obere okwu, iOS pụrụ-emebi otú ị ga-atụfu data dị ka mma.
Nje virus na-malware bụ oké nsogbu ma ọ bụrụ na ị na-eji a otutu oge sọọfụ na weebụ.
Part 2. 3 ụzọ rertieve ehichapụ faịlụ site iOS 9 ngwaọrụ
Ma eleghị anya, adịkwa gị data ada na-adịghị mkpa, ma ọ bụ nnukwu nsogbu na nwere mmetụta ọjọọ n'ahụ na-arụ ọrụ gị na-elekọta mmadụ ndụ. Ị ga-atụfu kọntaktị, ozi na foto na ndị dị mkpa maka gị. Luckily, E nwere ọtụtụ ụzọ nke pụrụ inyere gị dozie nsogbu a. Atọ, ọtụtụ nkịtị ụzọ bụ:
Naghachi data si iTunes ndabere.
Naghachi data si iCloud ndabere.
Jiri iOS Data Recovery Mmemme.
Ma, e nwere ụzọ ọzọ bụ irè karị na ngwa ngwa. The Wondershare Dr.Fone maka iOS bụ ama-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ nwere naghachi ha data. Nke a na usoro bụ bara uru mgbe ị na mberede hichapụ gị data ma ọ bụ na ị nwere nsogbu na iOS 9. The mma atụmatụ nke Wondershare Dr.Fone maka iOS bụ:
Ọ dị mfe iji. Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa ọtụtụ ugboro na kọmputa gị òké na gị data ga-gbakee.
Ị nwere ike iweghachi data ọ bụla na rụrụ arụ ngwaọrụ.
Ị nwere ike ịhọrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi na nke ị na-eme adịghị.
Ọ bụ nnọọ ngwa ngwa.
1st ụzọ: Naghachi gị data kpọmkwem site iOS 9 ngwaọrụ
1. Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS. Nwụnye usoro dị mfe na-eme ma ọ dịruru a nkeji ole na ole. Jikọọ gị smartphone na kọmputa na nri ehihie Wondershare Dr.Fone. Ị ga-asian na gị iPhone jikọọ na ị ga-enwe ike ịhụ ihe nlereanya (iPhone 5, 6 na wdg).
2. Pịa "Malite" na software ga iṅomi ngwaọrụ gị furu efu faịlụ. Mgbe e mere ya, ị ga-ahụ ndepụta nke faịlụ niile, Wondershare Dr.Fone maka iOS nwere ike iweghachi. The ndepụta gụnyere ozi, videos, oku akụkọ ihe mere, foto na a otutu ihe.
3. niile ị chọrọ ime bụ họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachi. Cheta na-enyocha faịlụ a ga-eweghachi. Ọzọkwa, ị pụrụ ịhụ na ozi ndị ọzọ banyere ndị faịlụ. Ugbu a, pịa "naghachi" na ị na-mere. Ọ na-emekarị na-ewe nkeji ole na ole na ị na-eme.
2nd otú: selectively naghachi iOS 9 data si iCloud ndabere
1. I nwekwara ike iji Wondershare Dr.Fone maka iOS 9 naghachi gị data si iCloud. Dị ka ị maraworị, ị ga-ibudata ma wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS 9. Ị ga mkpa a di na nwunye nke nkeji iji na-eme nke a. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na ẹkedori Wondershare Dr.Fone. Banye na gị iCloud akaụntụ. I kwesịrị ịma na gị Apple ID na paswọọdụ na-echebe ma na ọ dịghị onye pụrụ ịmata ha.
2. The software ga-ahụ niile iCloud backups Ị na-azọpụta. Ihe niile ị chọrọ ime bụ see download button na budata ha gị na kọmputa. Ọ na-atụ aro ka ibudata ọhụrụ nkwado ndabere na mpaghara onye na kasị faịlụ. Mgbe download zuru ezu, pịa na otu button wepụ faịlụ.
3. N'oge usoro, ị nwere ike ịhụchalụ ụfọdụ faịlụ na. All data, dị na iCloud ndabere nwere ike weghachiri eweghachi. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji weghachi ụfọdụ ozi ma ọ bụ faịlụ, dị nnọọ uncheck ha. Cheta na nbudata na adịrị oge na-adabere na a size nke ndabere. Ọ bụrụ na ị na-adịghị oge zuru ezu, ma ọ bụ gị njikọ Ịntanetị bụ ngwa ngwa, uncheck faịlụ ị na-achọghị iji naghachi. Mgbe ị na-eme, dị nnọọ pịa "naghachi" na-eche maka Wondershare Dr.Fone maka iOS mezue usoro.
3rd otú: selectively naghachi iOS 9 data si iTunes ndabere
1. Wondershare Dr.Fone maka iOS nwere ọzọ nhọrọ maka iweghachi gị data. Ọ na-eweghachiri si iTunes ndabere. The usoro dị nnọọ mfe ma yiri gara aga ọzọ. Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa gị na ẹkedori Wondershare Dr.Fone maka iOS. Họrọ "naputa site na iTunes ndabere faịlụ" na usoro ihe omume ga-egosi gị niile backups na dị.
2. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na ị chọrọ na pịa "Malite iṅomi". Mgbe Doppler zuru ezu, ị ga-enwe ihe zuru ezu ndepụta nke faịlụ na dị maka na-agbake. Faịlụ niile ga-ekewa ke edemede. N'ihi na ọtụtụ ọrụ na-eweghachiri ozi, na-akpọ ihe mere eme, foto na vidiyo bụ ihe kasị mkpa. Luckily, ndị a niile na edemede na-akwado.
3. Ugbu a, ị nwere ike họrọ faịlụ na ị chọrọ iji naghachi. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi faịlụ niile, dị nnọọ ego niile edemede ebe faịlụ ndị na pịa "mgbake" button. Agbake-emekarị ikpeazụ ọtụtụ minit. Mgbe e mere ya, ị ga-enwe gị data na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ a kpọmkwem faịlụ, i nwere ike iji "Chọọnụ" nhọrọ. Ke adianade do, ị ga-echeta bụghị ịkwụpụ a ngwaọrụ mgbe mgbake bụ na-enwe ọganihu. Naanị mgbe ọ na-eme, ị nwere ike Ikwupu ngwaọrụ gị site na kọmputa.
> Resource> iPhone> iOS 9 Data Recovery: Olee otú iji weghachite Lost Data si iOS 9 Devices